Madaxweyne Trump oo mar kale weerar afka ah ku qaaday Ilhan Cumar. – Idil News
Madaxweyne Trump oo mar kale weerar afka ah ku qaaday Ilhan Cumar.
WASHINGTON (IDIL NEWS)-Madaxweynha Dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa markale waxa uu weerar afka ah ku qaaday Ilhaan Cumar oo ah Gabar Soomaali ah kana tirsan aqalka Congress­ka Mareykanka.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay inay jiraan Xildhibaano neceb Mareykanka xilli uu khudbad ka jeedinayey shir looga hadlayay siyaasadda, waxaana dadkii shirkaasi joogay ay ku dhawaaqeen Magaca Ilhaan Cumar.
Waxa uu sheegay inay hayaan dad Xildhibaano ah kana tirsan Aqalka Hoose Mareykanka,isla markaana Neceb Mareykanka ,waxaana hadalkaasi uu noqday mid aad loo hadal hayo.
Dhawaan ayaa waxaa jirtay dood adag oo u dhaxeysay Trump iyo Ilhaan Cumar taas oo u muuqata in markale uu dib u soo kicinayo Trump,waxana Ilhaan Cumar ay aad u cambaareysaa siyaasada uu ku dhaqmo Madaxweyne Trump.